Tonizia : Ny Andro Naha-Filoha An’i Ben Ali · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2011 1:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Svenska, Italiano, Español, Ελληνικά, English
Ny 7 Novambra 1987, ilay filoha teo aloha Zine Al Abidine Ben Ali, izay manao sesitany ny tenany any Arabia Saodita, no tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny alàlan'ny fanonganam-panjakana tsy nisy rà nandriaka. Ben Ali dia lasa filoha, taorian'ny taratasy ara-pahasalamana nosoratan'ny dokoteran'ilay mpitondra teo aloha Habib Bourguiba nilazàna fa tsy afaka ny hamita ny andraikiny amin'ny maha filoha azy intsony ity farany.
Houssem H. Nandefa bitsika[fr] :
Tamin'izany vaninandro izany, ilay bilaogera Toniziana Imen Braham dia namorona bilaogy Tumblr ka nomeny anarana hoe 7 Novambra tsy misy an'i Ben Ali. Ilay bilaogy dia natao indrindra mba hifampizaràna sy hihomehezana izay lahatenin'ilay filoha taloha, ary ireo hira fiderana azy.
Hoy izy nandefa bitsika [fr] :
Ohatra, Imen nizara lahateny nataon'i Ben Ali tao amin'ny fahitalavitra [ar], izay ahitana azy miresaka manokana amin'ny tanora noho ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora. Hoy izy nitsikera :
Bilaogy iray hafa ao amin'ny Tumbl antsoina hoe Le musée mauve (Ilay Mozea Volomparasy) [fr] no noforonina, mba ho amin'ny tanjona toy izany ihany.
Oussama Messaoud, nanoratra lahateny noforonina [ar], momba ny zavatra tokony ho nolazain'i Ben Ali, raha mbola teo amin'ny fitondrana izy. Mikasika ilay lahatsoratra, Oussama manoratra hoe :
Ity 7 Novambra ity dia nifanindry tamin'ny andro faharoa amin'ny fankalazàna ny Eid Al Adha . Tao amin'ny Twitter, Protact no nanao ny fampifandraisana :
@protact : Mankalaza ny andro faharoa amin'ny fankalazana ny #Aid sy ny #7Nov voalohany tsy misy ny kabarin'ilay filoha voaongana ry zareo Toniziana